संसद विघटन सम्बन्धी बिवादका २८ रिट अदालतमा, फैशलाको प्रतिक्षा ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » संसद विघटन सम्बन्धी बिवादका २८ रिट अदालतमा, फैशलाको प्रतिक्षा ?
संसद विघटन सम्बन्धी बिवादका २८ रिट अदालतमा, फैशलाको प्रतिक्षा ?
nepaltube Published On : 25 May, 2021
काठमाडौं । संसद विघटन सम्बन्धी बिवादलाई लिएर सर्बोच्च अदालतमा २८ थान रिट दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार १४६ सासदको तर्फबाट संयुक्त एउटासहित २८ वटा रिट दर्ता भएका हुन् ।
विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदमध्ये १३९ जना आफैँ उपस्थित भएर निवेदनमा सनाखत गरेका थिए भने बाँकी ७ जनाले वारेसमार्फत उपस्थिति जनाएका थिए । संसद पुनस्थापन गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २४ वटा रिट र राष्ट्रपतिको कदम सदर गर्नुपर्ने माग सहितका चारवटा निवेदनमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर चुनावमा जाने निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । जसमध्ये ९ वटा रिट उपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ मंगलबार हुँदैछ ।
सोमबार, आफूले समर्थन गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४६ सांसद आफैं लामबद्ध भएर उपस्थित भएका थिए । नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक बहुमत सांसद सरकार गठनका लागि सर्वोच्च अदालतको रिट दर्ता शाखा अघि लामबद्ध भएको यो दृष्य विरलै देख्न पाइन्छ । जुन दृश्य सर्वोच्च अदालत आफैंले पनि खिचेर राखेको छ ।
बहुमत सांसद आफै उपस्थित भएर बैकल्पिक सरकार गठनको संभावना कायम रहँदा रहँदै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले सुनियोजित रुपमा संसद विघटन गराएर कथित चुनाव घोषणा गरेको दाबी प्रस्तुत गर्दैगर्दा अदालतको फैशला कहिले र कस्तो आउँला ? सबैले चासोका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।